As of Sat, 15 Aug, 2020 15:45
डोजरमात्रै गुड्ने सडक
स्थानीय सरकार आएपछि गाउँगाउँमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै करोडांै बजेट खर्च गरे । सोहीअनुसार कर्णाली रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाका ६० वटा वडामै डोजर चालकहरू प्राविधिक बन्दै सडक निर्माण गरे । जसका कारण कतै बस्ती जोखिमदेखि मापदण्डविपरीतका सडकले दिगो विकासमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, सामान ढुवानीमा सहजता ल्याउने लक्ष्यका साथ करोडौं बजेट खर्च गरी सडक निर्माण भए पनि नागरिकलाई पुरानै दुःख जस्ताका तस्तै छन् ।
जाजरकोटमा टाईम कार्ड सुरु
बढ्दो दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न जाजरकोट सदरमुकामबाट छुट्ने र आउने सवारी साधनमा टाईमकार्ड लागू गरिएको छ । दशै, तिहारलगायत चाडपर्वमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेर द्रुत गतिमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन टाईम कार्ड लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए ।
प्रदेश यातायात विधेयकको प्रमाणीकरण
प्रदेश–१ का प्रदेश प्रमुख प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेशसभाको भदौ २६ गते बसेको बजेट अधिवेशनको ४८ औं बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । संविधानको धारा २०१ बमोजिम तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर रेग्मीले जानकारी दिए । हालसम्म सवारी विधेयकसहित प्रमाणीकरण भएका विधेयकको संख्या ४१ पुगेको छ ।
चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय बाख्रा विज्ञ सम्मेलन हुने
एसिया क्षेत्रीय बाख्रा विज्ञहरुको सम्मेलन हुने भएको छ । चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी कार्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म एसिया क्षेत्रीय बाख्रा विज्ञहरुको सम्मेलन हुने जानकारी दिएको हो । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, क्यानडा, चीन, इन्डोनेसिया, जापान, क्युवा, फ्रान्स बंगलादेश, केन्यालगायतका १४ देशका बाख्रा बैज्ञानिक, अनुसन्धानदाता, उद्यमी र विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहने छ ।
दुई बालिकालाई बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटस्थित कोटखोलामा आएको बाढीले बेपत्ता बनाएको छ । शनिबार राती साढे १० बजे भिषण वर्षापछि खोलामा आएको बाढीले १० वर्षकी प्रविना परियार र ६ वर्षकी अनुश्का परियार बेपत्ता भएका हुन् । बगरफाँटमा स्थायी रुपमा बस्ने माया परियारको घरमा पाहुना बनेर गएका दुई बालिका बेपत्ता भएका हुन् ।
सदरमुकाम–टिपतला नाका सडक निर्माण अवरुद्ध
सरकारले २०६३ सालमा भारत र चीन जोड्ने गरी १४ वटा सडक करिडोरको योजना ल्याएको थियो । तीमध्ये ताप्लेजुङ सदरमुकाम–टिपतला भन्ज्याङ–तिब्बतसम्म सडकले जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको हो । यद्यपि १२ वर्षको अवधिमा ७६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ । फुङलिङ नगरपालिकास्थित सुकेटारदेखि फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लुङथुङसम्म ७६ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । अब लुङथुङ–ओलाङचुङगोलासम्म (२३ किमि) ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।
कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप
अन्नपूर्ण पैदलमार्गअन्तर्गत पर्ने मनाङमा ब्यक्तिगत तथा बेवारिसे अवस्थामा रहेका सडक कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप तथा चेकजाँच गरिएको छ । गत शुक्रबार अमेरिकी संस्था नेसनल जियोग्राफी संस्थाले मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको उपर मनाङ, मुन्चे, भ्राका, ङावल, हुम्दे, पिसाङ, ढुकुरपोखरी र चामे गाउँपालिकाको चामे र बाटोमा भेटिएका ब्यक्तिगत तथा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका कुकुरलाई रेविजविरुद्धको खोप तथा चेकजाँच गरेको हो ।
बाढी र पहिरोले यातायात सेवा अवरुद्ध
लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण खोटाङमा सञ्चालित सबै यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । राजधानी काठमाडौँ तथा तराईका जिल्ला जोड्ने सडकको विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोका कारण मङ्गलबार रातिदेखि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको अर्खौले–हलेसी, हलेसी–जयराम, घुर्मी–खुर्कोट तथा सगरमाथा राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरेका कारण सडक अवरुद्ध भएको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले बताए ।
खेती योग्य जमिनमा घरैघर
जिल्लाका धान फल्ने मुख्य फाँटहरु यतिबेला घरैघरले ढाकिएका छन् । खेती योग्य उर्वर भूमीका रुपमा चिनिएका माढिबजार, तीनपाटन, दुधौली र मरिणका खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम घर निर्माण भइरहेका छन् । शहरीकरणसँगै बिस्तारै घरहरु थपिँदै गएपनि भूकम्पपछि नयाँ घर थपिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । पहिले यतिबेला हरियो धान देखिने ठाँउमा अहिले रंगिविरंगी घरहरु देख्न सकिन्छ ।
पोखरा- कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा लगातार परेको पानीका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ । गाउँपालिकाअन्तर्गत वडाका विभिन्न स्थानमा पहिरोले ठूलो क्षति बनाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले जानकारी दिए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन विज्ञको जोड
प्रदेश नम्बर २ का नीति आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रा. डा. भोगेन्द्र झाले प्रदेश २ को दिगो तथा मानव विकासका लागि ३ वटा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार जनकपुरमा राष्ट्रिय योजना आयोग, यूएनडीपी र नीति आयोगको आयोजनामा भएको दिगो तथा मानव विकास विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. झाले शिक्षा, स्वास्थ्य र ज्ञानलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढेमा मात्रै प्रदेश समृद्धि र विकासतर्फ अग्रसरता लिने उनको दाबी थियो ।
जोखिम मोलेर यात्रा
कमलामाई नगरपालिकास्थित माडी बजारबाट तिनपाटन गाउँपालिका हिँडेका मणिराज गुरुङ बीच बाटोमा नै अलपत्र परे । बजारबाट बिहान ७ बजे हिँडेका गुरुङलाई तिनतले पुग्न झण्डै १ घण्टा लाग्यो । “पहिले बाइकमा १ घण्टामा बेलघारी नै पुगिन्थ्यो,” उनले भने, “यो चोटि त बेलघारी पुग्न ३ घण्टा लाग्यो, तिनतलेबाट बाइक नगएपछि हिँडेरै गएँ ।” जसरी पनि जानै पर्ने नगए जागिरै जाला भन्ने डर मौसमको ख्यालै नगरी बाटो खन्दा हामी समस्यामा छौं, उनले भने ।
माछा बढेपछि पेसा छाडेका पनि फर्कन थाले
माछा पारेर आफ्नो जीविका चलाउने राप्ती गाउँपालिका–७ निवासी पाटेश्वरी चौधरी केही समय यता माछा मार्ने छोडेका थिए । उनले विगत ६÷७ वर्ष यता माछा मार्ने छोडेको बताउँछन् । नदीमा माछा पाइन छोडेपछि आफूले माछा मार्ने पेसा पनि छाडेको उनको भनाइ छ । “मैले राप्ती नदीमा माछा पाउन छोडेपछि पेसा नै परिवर्तन गरेको हुँ ” चौधरीले भने ।
अम्लीयपन झापामा बढ्दै, इलाममा घट्दै
झापाको माटोमा अम्लीयपनको मात्र बढ्दै गइरहेको छ । माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला झापा सुरुङ्गाले पछिल्ला हरेक वर्षमा माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको जनाएको हो । माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा झापाको माटोमा अम्लीयपनको मात्र ३५ प्रतिशत थियो । जसमा तटस्थ प्रतिशत १९ रहेको थियो ।
विक्रि भएन यार्सागुम्बा
अपि हिमाल गाउँपालिका– ४ का कल्यानसिंह बोहराले गत जेठ र असार महिनामा सङ्कलन गरेको यार्सागुम्बा अझै विक्रि गर्न पाएका छैनन् । यार्सागुम्बाको बजार मूल्यमा आएको गिरावटका कारण यार्सागुम्बा गाउँघरमै थन्किएको छ । मूल्य नै नतोकिएपछि संकलकहरूले व्यापारीलाई यार्सागुम्बा विक्रि गर्न नपाएपछि घरमै थन्किएको छ ।